Fanondranana « bois de rose » 1000 kaontenera : Mitodika any amin’ny Bianco -
AccueilRaharaham-pirenenaFanondranana « bois de rose » 1000 kaontenera : Mitodika any amin’ny Bianco
Dia ireny niaraha-nahita ireny ny hetsika nataon’ny MAPAR izay niampanga ny fitondrana sy ny solombavambahoaka mpomba ny fitondrana ho mpanao kolikoly ary tonga nametraka fitoriana teny amin’ny Bianco mihitsy taorian’ny fielezan’ilay horonantsary nalaina an-tsokosoko teny amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena, izay efa notsipahan’ireo depiote voakasik’izany ary nitondran’izy ireo fanazavana teny amin’ny hainoamanjery.
Mazava izany izao fa ampy atao porofo hanokafana fanadihadiana eny amin’ny Bianco ny horonantsary, na nalaina an-tsokosoko izany na nahazo fankatoavana. Inona tokoa moa ny zava-nitranga tamin’iny herinandro ambony iny raha hiverenana kely…
Notanterahana teny amin’ny Antenimieram-pirenena ny fotoam-pivoriana nifidianana ireo volavolan-dalana mifehy ny fifidianana. Lany teo anivon’ity andriam-panjakana ity ireo volavolan-dalana ka solombavambahoaka miisa 79 no nandray anjara tamin’ny fifidianana nandany izany. Nivoaka ny toeram-pivoriana ireo solombavambahoaka avy amin’ny fanoherana rehefa tsy nahomby ny fanakorontanana, nanatanteraka ny adidy nankininan’ny vahoaka kosa ireo solombavambahoaka miisa 79.
Fotoana fohy taorian’izany anefa, nisy horonantsary nivoaka tany amin’ny tambazotra sy ny facebook izay nambara fa fizaram-bola teny amin’ny Paon d’Or, manodidina io fifidianana teny Tsimbazaza io. Tsy niandry el any MAPAR sy ny TIM fa nihazakazaka teny amin’ny Bianco ary nametraka fitoriana. Ny Bianco koa moa tetsy an-danin’izany, tahaka ny fanaony raha vao fitoriana mikasika mpitondra, nanao valan-dresaka an-gazety. Ny zavatra azo singanina ao anatin’izany rehetra izany dia ampy atao porofo hanenjehana olona eny anivon’ny Bianco ny horonantsary.
Navoakan’ny Global Witness et Environmental Investigation Agency, izay nanao ny fanadihadiana mikasika ny fanondranana “bois de rose” 1000 kaontenera tany Sina nandritra ny Tetezamita ny horonantsary mirakitra izany trafika avo lentan’ny HAT. Voasokajy ho isan’ny ady heloka be vava tokoa mantsy ny fanondranana andramena ary tsy maintsy tambazotra goavana be niray petsapetsa tamin’ny mpitondra mihitsy vao afaka nanatanteraka izany fanondranana “bois de rose” 1000 kaontenera izany.
Mitodika any amin’ny Bianco araka izany ny mason’izao tontolo izao, lasa raharaha iraisam-pirenena mantsy ity trafika-na andramena ity. Vonona hanokatra fanadihadiana miainga avy amin’io horonantsary io ve ny Bianco satria tena kolikoly mazava be tsy azo hiadian-kevitra no voarakitra ao anatin’izany ary ny Global Witness et Environmental Investigation Agency rahateo no namoaka azy tany amin’ny tranonkalan’ny Youtube mba ho hitan’izao tontolo izao afatsy ny Bianco irery ihany angamba. Koa raha manana “connexion” ahafahana manokatra ireny tranonkala ireny ny Bianco, dia indro homena azy ireo ny adiresy: https://www.youtube.com/watch?v=8jMoftLZyCM. Afaka manantena araka izany ny mpanara-baovao fa hisokatra tsy ho el any fanadihadiana mikasika ny fanondranana ireo “bois de rose” 1000 kaontenera ireo!